एमआरसीपीसीएच परीक्षा अब नेपालमै
मेम्बर अफ रोयल कलेज अफ पिडियाट्रिक्स एण्ड चाइल्ड हेल्थ (एमआरसीपीसीएच–यूके) परीक्षा अब नेपालमा नै सुरु भएको छ । काठमाडौंको धापासीमा रहेको ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुराको जानकारी गराइएको हो ।
अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डेले अस्पतालमा उपलब्ध विश्वस्तरिय सेवा सुविधा तथा विशेषज्ञहरुको टिमसँगै यहाँ हुने गरेका विविध शैक्षिक गतिविधिहरुका कारण रोयल कलेज अफ इङ्ल्याण्डले नेपालमा लिने एमआरसीपीसीएच परीक्षाका लागि छनोट गरेको जानकारी गराएका छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा यस किसिमका मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका विविध विषयहरुमा सहकार्य गरी अघि बढ्न ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल सदैव तत्पर रहेको उनले बताए ।
आरसीपीसीएचका स्ट्राटिजिक लिड डा. रमेश मेहताले यो परीक्षा नेपालमा हुनु गर्वको विषय भएकोले यसले नेपाललाई सार्क मुलुकहरुको परीक्षा केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न सकिने प्रबल सम्भावना रहेको बताए । संसारभरका ३५ वटा मुलुकमा रहेका परीक्षा केन्द्रहरुमार्फ्त हरेक वर्ष छ हजार बालरोग विशेषज्ञहरुको परीक्षा लिने गरिएको उनले जानकारी दिए ।
आरसीपीसीएचका सिनियर एक्जामिनर डा. मिथलेश लालले पहिलो पटक नेपालमा हुन लागेको उक्त परीक्षा यस पटक परिमार्जित तथा प्राविधिक हिसाबले थप स्तरीय भएको जिकीर गरे । दुई दिन हुने परीक्षाका लागि रोयल कलेज अफ पिडियाट्रिक्स एण्ड चाइल्ड हेल्थ बेलायतबाट १५ जना फ्याकल्टी नेपाल आएका छन् । नेपाल तथा नेपाल बाहिरका गरी २४ जना बालरोग विशेषज्ञहरु परीक्षार्थीका रुपमा सहभागि भएका छन् ।
मुगुमा सुरक्षित गर्भपतन गराउने बढे
बाराका स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधी अभाव
प्रसुति गृह र वीर अस्पताल पुनर्निर्माण सम्पन्न